Unokunyamekela njani isikhumba sakho kwi-22 ubudala
Nangona intombazana imncinci kwaye inhle, ayikucingi ngendlela yokunyamekela kakuhle ulusu lomntu oneminyaka engama-22 ubudala. Ufuna nje ukuba ube mnandi, uthakazelisa, umnandi kwaye ubaluleke kakhulu ukujonga njalo ekulungele. Kodwa kufuneka athathe ixesha lokunyamekela isikhumba sakhe. Kwaye akadingeki ukuba achithe ixesha kunye nemali kuyo yonke iindidi zee-salons ezibuhle, i-solariums kunye namaziko e-spa, unakho ekhaya ngezandla zakho ukuvelisa ukunakekelwa okufanelekileyo kwesikhumba sakho.
Ewe, ukuba intombazana encinci inceda umama ngendlela yokunyamekela kakuhle ulusu lomntu oneminyaka engama-22, ngenxa yokuba intombazana encinci ayinikiweyo kwaye ayibekekanga engqondweni yazo zonke iimigaqo. Inyaniso yokuba usemncinci akayikumkhulula ekubeni akwazi ukunyamekela ulusu lwakhe. Ngokufanayo, unokukwazi ukucoceka ngokufanelekileyo, ithoni kunye nenyanga yokunyusa okanye ukondla ulusu lobuso. I-cosmetologists zanamhlanje ziyazi kwaye zinika ithuba lokuba sikwazi ukukhetha iindlela eziyimfuneko eziza kuhambelana nesikhumba kule minyaka. Emva koko, ngoku kubalulekile ukuqala ukubeka iliso kakuhle nokunyamekela ulusu, oneminyaka engama-22 ubudala.
Ungacingi ukuba inkqubo enjengokunyamekelwa kwesikhumba kunokuba nzima, ngokuchaseneyo kuyathakazelisa kwaye iyalathisa, ngokukodwa kwisimo esiqhelekileyo kuwe, oko kukuthi, ekhaya. Emva kwakho konke, sebenzela ekunyamekeleni inxalenye ebalulekileyo yomzimba kumntu, njengesikhumba, unikeza ukuzithemba okuthile, ekubeni unokuba ngumhle. Ukuba nangona indalo ayinakukunika ngokupheleleyo ubuhle, ungayithenga ngokwakho, ubuncinane uyinyamekele kwaye uzibeke ngendlela. Kufuneka ukuba uzijwayeze kwi-systematics ekunakekeleni kwesikhumba ebusweni, kunye nentamo, izandla, kunye nomzimba wonke, oquka ukucoca ulusu lomzimba wonke kumdaka, uthuli, kunye neziqhumiso zosuku lonke.
Into yokuqala yokunyamekela ngokufanelekileyo iya kucoca . Kumele kwenziwe kwaye kufuneka kwenziwe kwansuku zonke, kokubili kusasa nangokuhlwa. Oku kunokwenziwa ngoncedo lwamanzi afudumeleyo, njengoko kufutshane negumbi ngangokunokwenzeka, kwaye nayiphi na indlela ekhethwe nguwe okanye ngoncedo lwenzululwazi, ofanelekileyo yobudala kunye nohlobo lwesikhumba. Qaphela ukuba uluhlu lwe-horny lunomsebenzi othile wokuvuvukala ngaphantsi kwefuthe lamanzi, ngoko kungcono ukuhlamba ubuso bakho nayiphi na ioli okanye ukhilimu ngaphambi kokuba uhlambe ubuso bakho, kwaye ukuba kunokwenzeka emva kokuhlamba. Kungcono ukuzikhawulela ekusebenziseni isepha, isepha okanye isepha, kuba le mveliso inomile kakhulu ubuso bakho. Ngobusuku kuthetha ukuhlanjululwa nokuhlamba isikhumba, unokuquka i-creams, i-gel okanye i-lotions kunye nabanye. Ukuba ufuna ukuphazamisa kakuhle isikhumba sakho esincinci, unokwenza inkqubo enjengokuhlanjululwa okuchaseneyo , okokufutshane ukutyhila kwamanzi abandayo, ukutshintshisa ngokufudumele, kwesikhumba ebusweni. Le nkqubo inokuphazamisa ngokuphawulekayo ukuphucula ukujikeleza kwegazi kwesikhumba kwaye inokuba negalelo ekwenzeni ukugcinwa kwemigca ye-sebaceous gland kwiiseli zayo. Oku kunceda ulusu lube ngcono ukunqanda ukutshabalalisa kwangaphambili, luba luhlobo lwe-tonic kwaye lunciphise iipores. Kodwa ukusetyenziswa kwamanzi abandayo ngokuhlwa, ngakumbi ngaphambi kokuba ixesha lokulala lingathandeki.
Emva kokuhlanjululwa kwesikhumba, kulandelwa inkqubo yokubamba . Ukwenza oku, zonke iintlobo ze-assortments ezisuka kwivenkile okanye ikhemistri yakho yekhanda kunye nekhredithi iya kuhambelana. Into ephambili kukuba uyayithanda.
Ukucoca okanye ukunyusa.
Ekhaya, kufanelekile ukusebenzisa ama-creams, ii-oils zemifino, iimaski zokucoca kunye neoli ezixinzezelayo ezithwala amavithamini kunye nezondlo kwesikhumba sakho. Ukukhethwa kweengxowa-mali ngoku kwiivenkile okanye i-pharmacy zanele ngokwaneleyo, ukuze kungabikho ubunzima ekuzuzeni. Unokuphinda ubhekise ubuso bakho nentamo yakho entanyeni kunye nokuhluthwa kwe-hygienic hygienic, okuza kuphuculwe ngakumbi ngabachwephesha abanolwazi nabaqeqeshiweyo.
Ukusebenzisa ukhilimu kuyimfuneko похлопывапющими kunye nokunyanzelisa ukunyakaza. Kodwa ungayifaki imali eninzi, kuya kukwanela kuphela kwintonga yomunwe wakho (isikhumba sombuso singamitha malunga ne 0.75 amagremu). Amagremu anqwenelekayo okhilimu angakhokelela kwimiphumo engathandekiyo, umzekelo, ukubonakala kokucaphukisa kunye neempumpo. Ngomso kungcono ukusebenzisa isicelo sikhilimu emva kokuhlamba, kwaye unokususa kuphela umswakama obuninzi kunye nochumisi kunye netheyile yephepha okanye i-napkin. Kuya kuba kuhle kakhulu ukusebenzisa i-herbs of herbs for washing washing, oku kuya kunceda ukuzolalisa iiseli ezinomsindo kwaye unike ukutshabalalisa kwesikhumba ebusweni. Amafutha okanye ama-emollient creams ayakunceda ekukhuseleni ulusu kwizinto ezinobungozi ezifana nomoya, ilanga kunye nomoya obandayo okanye omanzi, njalo njalo, kuba iifayile ziqukethe izihlungi zokukhanya.
Kuya kuba luncedo ukwazi ukuba i-cream kufuneka isetyenziswe ngaphambi kokuba i-gymnastics, ngaphambi kokuhlamba, kunye nokuhlamba, kunye nesitya, kunye nakweyiphi na imicimbi yendlu (ngakumbi phambi kwesitofu), nangaphambi kokumisa iinwele ngeeswele.
Uluhlu oluthile lungcono ukumboza izixhobo ezikhuselayo , ngaphezu koko, ziphophule nge powder, oku kuza kwenza ifilimu ekhuselekileyo. Inkqubo yokusebenzisa zonke iintlobo zeemaski, i-creams nezinye izinto kufuneka zenziwe ngokuchanekileyo, ezizodwa ngokubhekiselele kwimigca ye-massage (le mizila yelula elincinane), ngenjongo yokuba, kungekhona ukunweba ulusu lobuso nentamo.
Kulo nyaka ubudala kusenjenjalo ukwenza iimaski eziqhelekileyo ebusweni, ngokwaneleyo kuya kuba nye, okanye ezimbini ngeveki. I-Mask ingathengwa kwi-pharmacy, ngokukhethekileyo, udongwe kunye nezinye, kwaye unokwenza le maski ngokwakho. Ngokomzekelo, ukusebenzisa izikhupha zamaqanda ngokudibanisa kwamavithamini amachiza athengiweyo kwiikhemisi. Okanye sebenzisa ubusi, ngaphandle kokuba ungenayo i-allergies, eyona yicoceko ecacileyo kunye ne-moisturizer kwaye inika nokuthobeka kunye nentlungu kwesikhumba. Iimaski ezinjalo zigcinwe ebusweni malunga nemizuzu engama-15-20, kodwa akukho nto, kodwa isetyenziselwa ukutshisa kwesikhumba, ukuthukuthela kokuphelelwa kwentsholongwane kunye nokubonelela ukutya okunomsoco. Uze uhlambe uqale ufudumele, kwaye amanzi aphelileyo.
Unokukhetha okungenani kanye ngeveki, ukuxhatshaza okukhathekayo , ngendlela yamanzi ashushu kunye abandayo, ukugqiba oko kubanda kakhulu. Ukugqiba, unokusebenzisa iqhwa ukusula ubuso bakho, okungaba ngamanzi alula okanye nayiphi na imifuno.
Ukuziqhelanisa ukujonga kakuhle ulusu lomntu omncinci, ukwenzela ukuba kwixesha elizayo wakhangela imibono emininzi.
Ubuncu bobuko be-Cosmetic buso
Iinkqubo ezifanelekileyo zekhanda lobuso
Iingcebiso zokubumba zasebusika, ihlobo, iintwasahlobo zentwasahlobo kunye neyekwindla
Iimveliso ezinonophelo zeengxaki zesikhumba
Ukukhupha abantwana kunye nemithetho yokuziphatha kwabo
Indlela esiyikhohlisayo ngayo kwiLoteti yaseRashiya
Iimpawu kunye nesondlo esifanele kunye ne-pyelonephritis
IiMatballs kunye neklabishi kunye ne-hazelnuts
Indlela yokufunda ukutya ngaphantsi?
Ukuzivocavoca ukuphucula isifuba